Sida loo Hagaajiyo Xiriirkaaga Ma aha Khalad Gaar ah (Hagaha Mulkiilaha Goobta) - MundoCMS
Casharrada Bilowga ah
Inicio » Sida loo Hagaajiyo Xiriirkaaga Ma aha Khalad Gaar ah (Hagaha Mulkiilaha Goobta)
Sida loo Hagaajiyo Xiriirkaaga Ma aha Khalad Gaar ah (Hagaha Mulkiilaha Goobta)
Ma waxaad ku arkaysaa "xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah" mareegahaaga WordPress? Tani waa fariinta khaladka ah ee aad ku arki doonto Google Chrome. Qalad isku mid ah ayaa ka muuqan doona dhammaan daalacashada casriga ah oo leh farriimo kala duwan, iyo cilad-baadhistu waxay noqon kartaa mid jahawareer u ah bilawga. Hagaha mulkiilaha goobtan, waxaanu ku tusi doonaa sida fudud ee aad u hagaajin lahayd khaladka "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah" ee ku jira mareegahaaga. Waxaan sidoo kale sharxi doonaa sababta qaladkan u soo baxay iyo sida aad uga fogaan karto mustaqbalka.
Waa maxay khalad "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah"?
1 Waa maxay khalad "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah"?
2 Waa maxay sababta fariintan khaladku u muuqato?
3 1. Ku qasbi dib u soo dejinta bogga
4 2. Ku hubi browsersyo badan
5 3. Nadiifi cache kaaga browserka
6 4. Hubi saacada kombiyuutarkaaga
7 5. Jooji antivirus iyo barnaamijyada VPN
8 6. Hubi inay dhacayso shahaadadaada SSL
9 7. Tijaabi server-kaaga SSL
10 8. Hubi magaca domainka shahaadada.
10.1 La wadaag tani:
10.2 La xiriira
Cilada "xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah" wuxuu ka muuqdaa mareegaha adeegsada SSL/HTTP-yada marka browserkaagu aanu awoodin inuu ansixiyo shahaadada SSL ee uu bixiyay mareegaha. Asal ahaan, shabakad kasta oo adeegsata SSL/HTTP waxay u soo dirtaa macluumaadka shahaadadda amniga mareegaha isticmaalaha booqasho kasta. Browser-yadu waxay markaa isku dayaan inay ansixiyaan shahaadada iyagoo isticmaalaya furaha dadweynaha ee la socda shahaadada. Haddii aad hubiso, isticmaalayaasha browserka ayaa sir xogta iyagoo isticmaalaya furaha gaarka ah ee uu soo diray mareegahaaga. Sirtan ayaa sugaysa kala wareejinta xogta dhexmarta browserka isticmaalaha iyo mareegahaaga
Si kastaba ha ahaatee, haddii browserku aanu xaqiijin shahaadada, si ammaan ah uma wareejin karo xogta oo soo bandhigaysa khaladka ah in xidhiidhka degelkaaga aanu ahayn mid gaar ah. Kani waa khalad SSL oo caadi ah oo ka muuqda dhammaan daalacashada casriga ah ee wata farriimaha khaladka yar ee kala duwan.
Google Chrome wuxuu u tusi doonaa khaladkan sida "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah".
Firefox waxay tusi doontaa khaladkan sida "Xiriirkaagu ma aha mid sugan".
Biraawsarkaaga Microsoft Edge waxa uu ku tusinayaa fariin khalad ah "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah" ama "Goobtan maaha mid ammaan ah" fariin khalad ah.
Safari, Brave, iyo daalacashada kale ayaa soo bandhigi doona fariimo la mid ah.
Waa maxay sababta fariintan khaladku u muuqato?
Hadda waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay waxa sababay qaladka "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah" ee ku jira mareegahaaga. Khaladkani waa mid gaar ah sababtoo ah, xaalado badan, waxay u muuqan kartaa adigoon wax isbeddel ah ku sameynin boggaaga. Tani waxay noqon kartaa sababo dhowr ah. Tusaale ahaan, haddii saacada kombayutarka isticmaaluhu ay shaqayn wayday, markaas waxaad tusi kartaa shahaadada inay dhacday. Dhacdo kale ayaa ah in shahaado uu mar hore soo saaray website-kaagu lagu kaydiyo browserka isticmaalaha. Furaha gaarka ah ee uu soo diray mareegahaagu lama mid aha shahaadidii hore iyo browserku ma xaqiijiyo xidhiidhka sugan. Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, sababta ugu cad ee khaladkan waa haddii shahaadada SSL ee mareegaha ay dhacday. Waa kuwan tillaabooyinka lagu saxayo qaladka "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah". Waxa kale oo aad isku dayi kartaa talaabooyinkan xitaa marka khaladku ka soo muuqdo mareegaha kale sidoo kale.
1. Ku qasbi dib u soo dejinta bogga
Talaabada ugu horeysa waa inaad isku daydo inaad shid iyo damiso. Kaliya ku bilow inaad xidho abka biraawsarka ka dibna dib u fur. Intaa ka dib, isku day inaad booqato mareegaha. Haddii aad weli arki karto qaladka, isku day inaad ku qasbi bogga inuu dib u soo dejiyo. Isticmaal furaha gaaban ee kiiboodhka Command + R ee Mac ama badhanka CTRL + dib u rar ee Windows. Tani waxay ku qasbi doontaa browserka inuu iska indhatiro nooca la kaydiyay ee bogga oo uu ku shubo nooca ugu dambeeyay.
2. Ku hubi browsersyo badan
Haddii aad ka hubiso browserka isla mishiinka, isku day inaad booqato website-ka adigoo isticmaalaya browser kale. Talaabadani waxay meesha ka saaraysaa suurtogalnimada in dhibaatadu ku kooban tahay browser gaar ah. Haddii ay sidaas tahay, dib u rakibidda browserkaas ayaa xallin doonta dhibaatada. Haddii kale, waxaad u gudbi kartaa tillaabooyinka xiga ee hagahan.
3. Nadiifi cache kaaga browserka
Waxaa laga yaabaa inaad tan u maqashay inay tahay tabta ugu horreysa ee dhibaatooyin badan oo internet iyo shabakadeed ah. Tani sidoo kale waa run kiiskan. Waxaa suurtogal ah in browserkaagu uu ka soo raro faylasha noocii hore ee degelkaaga, kaas oo kicin kara dhibaatada. Waxaan haynaa hage dhammaystiran oo ku saabsan sida loo nadiifiyo khasnad browserka dhammaan daalacashada waaweyn oo leh tilmaamo tallaabo tallaabo ah. Marka aad nadiifiso kaydka, isku day inaad mar kale booqato mareegaha si aad u aragto in arrinta la xaliyay. Haddii kale, sii wad akhriska.
4. Hubi saacada kombiyuutarkaaga
Caadiyan, kombayutarkaagu wuxuu si toos ah isu waafajiyaa wakhtigaaga iyo taariikhdaada. Si kastaba ha ahaatee, haddii kombayutarkaagu leeyahay habayn taariikh/wakhti khaldan, waxay keeni kartaa browserkaagu inuu rumaysto in shahaadada SSL ee degelka aanay shaqaynayn.
Isku-dubarid taariikhda/wakhtiga kumbiyuutarka Windows
Haddii aad isticmaalayso kombayutarka Windows, si fudud midig-guji barta shaqada oo dooro "Hagaaji taariikhda iyo wakhtiga."
Tani waxay furi doontaa qaybta taariikhda iyo wakhtiga ee Windows Settings app. Hubi in taariikhda iyo wakhtiga kumbiyuutarkaagu ay sax yihiin oo la hubiyay "Waqtiga si toos ah u deji" doorashada.
Taariikhda/waqtiga isku-xidhka kombayuutarrada Mac
Haddii aad isticmaalayso kombayutarka Mac, fur app-ka “Settings” oo taabo astaanta “Taariikhda & Waqtiga”.
Marka xigta, aad Taariikhda & Waqtiga tab oo hubi in doorashada ku xigta "Set date and time si toos ah" ikhtiyaarka la hubiyay. Haddii aan la hubin, dhagsii astaanta qufulka ee geeska bidix ee hoose ee daaqadda si aad u dhaqaajiso doorashadan.
5. Jooji antivirus iyo barnaamijyada VPN
Haddii aad ku isticmaasho barnaamijyada antivirus-ka kombiyuutarkaaga ama adeegga VPN, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si ku meel gaar ah u damiso. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad xaqiijiso in codsiyadani aysan xannibin shahaadada SSL oo ku qasbaysa browserkaaga inuu muujiyo qaladka "Xiriirkaagu maaha mid gaar ah". Haddii aad ogaato in mid ka mid ah abkaan uu keenay dhibaatada, waxaad la xiriiri kartaa kooxdooda taageerada kaalmo dheeraad ah.
6. Hubi inay dhacayso shahaadadaada SSL
Sababta kale ee caadiga ah ee khaladkan waa shahaadooyin SSL dhacay. Shahaadooyinkan ayaa la bixiyaa muddo cayiman waxayna dhacayaan marka ay gaadhaan dhammaadka muddadaas. Waxaad hubin kartaa taariikhda uu dhacayo shahaadadaada adigoo gujinaya calaamada qufulka ee ku xigta mareegahaaga oo doorta ikhtiyaarka shahaadada.
Tani waxay muujin doontaa faahfaahinta shahaadadaada SSL. Waxaad si cad daaqada uga arki kartaa taariikhda uu dhacayo shahaadada.
Inta badan diiwaan-bixiyeyaasha domain iyo bixiyeyaasha shahaadada SSL waxay si toos ah kuu ogeysiin doonaan marka shahaadada SSL ay u baahan tahay in la cusboonaysiiyo. Haddii aad isticmaalayso shahaadada SSL ee bilaashka ah, inta badan shirkadaha martigeliya WordPress waxay leeyihiin qoraallo si toos ah u cusbooneysiiya marka ay dhacayaan. Si kastaba ha ahaatee, hababkan ayaa laga yaabaa inay guuldareystaan ​​waxaana laga yaabaa in shahaadadaada SSL ay dhacdo. Ha werwerin, si fudud ayaad u xallin kartaa dhibaatadan adiga oo beddelaya shahaadadaada SSL. Tilmaamaha samaynta tan way kala duwanaan karaan iyadoo ku xidhan bixiyahaaga shahaadada iyo shirkadda martigelinaysa. Dhab ahaantii, shirkado badan oo martigelinaya ayaa cusbooneysiin doona haddii aad weydiiso.
7. Tijaabi server-kaaga SSL
Haddii aad adigu gacanta ku habaysay shahaadada SSL-ga, waxa laga yaabaa inaad rabto inaad hubiso in dhammaan habayntu ay si sax ah u shaqaynayaan. Si tan loo sameeyo, waxaad samayn kartaa tijaabada server SSL. Tijaabadani waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaqiijiso qaabaynta SSL oo dhamaystiran ee mareegahaaga. Tan waxaa ku jira TLS, tijaabinta browser-ka-goysyada, iyo hubinta qaabeynta SSL/HTTP. Sawir-qaaduhu wuxuu sidoo kale ku siin doonaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan imtixaan kasta.
8. Hubi magaca domainka shahaadada.
Waxaad u habayn kartaa shahaadadaada SSL si ay ula shaqeyso noocyo kala duwan oo magac domain ah. Tusaale ahaan, www iyo URL-yada aan www. Haddii shahaadadaada loo dejiyay hal nooc oo magacaaga domain ah oo aad gasho mareegaha adigoo isticmaalaya kala duwanaansho kale, khaladka "Xidhiidhkaagu maaha mid gaar ah" ayaa soo muuqan doona. Google Chrome ayaa soo bandhigi doona summada qaladka SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN. Ciladani waxay sidoo kale muuqan kartaa haddii aad dhawaan u guurtay degelkaaga domain cusub ama magaca martida loo yahay. Xalka fudud ayaa ah in la bixiyo shahaado SSL oo bilaash ah labada nooc ee magacaaga domain. Waxaad waydiisan kartaa bixiyahaaga martigelinta inuu kuu sameeyo. Xalka kale ayaa ah in loo jiheeyo booqdayaashaada mareegahaaga nooca saxda ah ee magacaaga domain. Fiiri maqaalkeena ku saabsan dejinta dib u habeynta WordPress si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad barato sida loo hagaajiyo "Xiriirkaagu maaha mid gaar ah" khaladka WordPress. Waxaad sidoo kale calaamadayn kartaa hagahayaga si aad u hagaajisid khaladaadka WordPress ee ugu caansan. Haddii aad jeclayd maqaalkan, fadlan ku biir kanaalkayaga YouTube si aad u hesho casharrada fiidyaha ee WordPress. Waxaad sidoo kale naga heli kartaa Twitter iyo Facebook.
Sida loogu daro oo loo isticmaalo widgets gudaha WordPress
Waa maxay xadka WordPress.com?
Sida loo qorsheeyo qoraaladaada WordPress (tallaabo talaabo ah)
21 Makhaayado WordPress ugu Fiican (2022)
Laabtoobyada lagu taliyay ee naqshadeeyayaasha garaafka
Sida loo habeeyo ok googleka Android iyo iPhone
21ka Mawduucyada WordPress ee ugu Fiican Blogyada Qoyska (2022)
Casharrada WordPress ee ugu Fiican 2009
Tusaalooyinka 18ka sare ee xubinimada ee ay tahay inaad hubiso 2022
6-da Fayl ee ugu Sarreysa ee WordPress Soo Geliya Plugins (Bilaash & La Bixiyo)
Waxa ugu Fiican Casharrada WordPress ee 2021 ee WPBeginner
7-da Sare ee Adeegyada Ilaalinta Xatooyada Aqoonsiga ee Ganacsatada Yaryar (2022)
6 Adeegyada Kormeerka ee ugu Fiican ee Ganacsiyada Yaryar (2022)
18+ Beddelka ClickFunnels ee ugu Fiican 2022 ( Tilmaamaha ugu Fiican + Bilaash ah)
12ka ugu sarreeya ee Xogta Keydka WordPress
Sidee loogu rari karaa dukaankaaga onlaynka ah martigelin cusub adoon lumin lacag wakhtiga dhimista?
Waa maxay sababta aad u shaqaaleysiiso hay'ad SEO ah?
Sida loogu daro kaydinta oo u sii wad muujinta foomamka WordPress
Sida Loo Tuso/Qariyo Qaybaha WordPress (Hagaha U Danbeeyay)
Waa maxay faraqa u dhexeeya bogga degitaanka iyo bogga internetka?
Sida loo sameeyo foom wax raadin ah oo ku habboon WordPress (tallaabo tallaabo ah)